Ungaxazulula Kanjani "Akuyona ibhukumaka evumelekile" Inkinga ku-MS Access - Ibhulogi Lokuthola Idatha
Ikhaya Ukubuyiswa kwedatha Ukubuyiselwa Kwefayela Ukubuyiswa Kwefayela Lehhovisi Finyelela Ukubuyiselwa KweDatabase Ungaxazulula Kanjani Inkinga "Not a bookmark esebenzayo" ku-MS Access
Finyelela Ukubuyiselwa KweDatabase January 26, 2021
Le yincazelo emfushane yokuthi yini ebangela inkinga yokuthi "Akuyona ibhukumaka evumelekile" ku-MS Access nokuthi yini okufanele uyenze ukulungisa inkinga.
Imininingwane ye-MS Access inikeza indlela elula yokuphatha amarekhodi ebhizinisi. Uhlelo lokusebenza lulula ukufunda, ngakho-ke, abasebenzisi akudingeki balwe nejika lokufunda eliqinile. Idatha ye-Access ingabamba amakhulu amarekhodi. Ngakho-ke, ukuthola amarekhodi nemibiko kungaba ngumsebenzi oyisidina, ikakhulukazi uma uthatha isinqumo sokwenza ngesandla. Yilapho imibuzo ye-VBA itholakala kalula. Iphutha elingenhla kungenzeka lapho uzama ukubheka imininingwane kusuka ku-database yakho.
Yini ebangela leli phutha
Kungenzeka uhlangabezane nale nkinga ngenkathi usesha amarekhodi ku-database yakho usebenzisa umbuzo we-VBA, futhi impahla yeBhukhimakhi ibuyisa inani elingavumelekile. Lokhu kungenzeka uma amarekhodi enganikwanga amanani ebhukumaka ngesikhathi sokuvula. Uma impahla yebhukhimakhi ingasebenzi njengoba bekulindelwe, maningi amathuba okuthi ifayela lakho lonakele. Isibonelo, ubudlelwano bezinto zakho ze-database bungaphazamiseka.
Kunezizathu ezahlukahlukene imbangela yolwazi lokuFinyelela olonakele. Isibonelo, uma ifayela lakho lilinyazwe yigciwane lekhompyutha kungenzeka lingasebenzi ngokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ukungqubuzana kweSoftware ne-Hardware emshinini kungavimbela i-database yakho ukuthi isebenze kahle. Ukulimala komzimba kudivayisi yokugcina lapho i-database igcinwa khona kungonakalisa ne-database.
Ukubhekisisa impahla ye-MS Access Bookmark
Impahla yebhukumaka eku-MS Access iyindlela yokuzulazula ekuvumela ukuthi ufinyelele amarekhodi kumatafula wakho wedatha. Inikeza okokuhlonza okuhlukile kuwo wonke amarekhodi njalo lapho ufinyelela kumaRekhodi. Lesi sici sikuvumela ukuthi ukhiphe futhi usebenzise amarekhodi angaphandle kwe-database usebenzisa imibhalo ye-VBA.
Amanani ebhukumaka awawona unomphela futhi angama-lost lapho uqeda iseshini. Ngokuzayo lapho ufinyelela kumarekhodi, amanani eBhukumaka azokwehluka. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi amarekhodi kuphela kumatafula anesici esiyinhloko esiyinhloko angabekiswa. Amabhukhimakhi anikeza abasebenzisi indlela ephumelelayo yokuzula kumarekhodi e-database.
Ungaxazulula kanjani leli phutha
Uma uhlangabezana nale nkinga, usebenzisa izindlela ezizenzakalelayo ze- lungisa i-database yokuFinyelela ekhohlakele. Isibonelo, indlela ehlanganisiwe yokulungisa ingakusiza ukubuyisela i-database yakho. Ngeshwa, lokhu kuyasebenza uma ubhekene nezinkinga ezincane zenkohlakalo. Uma le ndlela ingasebenzi, cabanga ukubuyisela i-database yakho usebenzisa ifayela lokusekelayo. Uma isipele sisesikhathini, uzoba ne-database yakho futhi isebenze emaminithini ambalwa. Konke okudingeka ukwenze ukufaka esikhundleni sefayela elonakele ngekhophi ye-database yokulondoloza.
Kwesinye isikhathi, ifayela lokusekelayo lingalimala, lisuswe, noma lingabikho. Lapha, kuzodingeka usebenzise ithuluzi lokutakula elivela eceleni njenge DataNumen Access Repair. Lokhu kusebenza kahle ekubuyiseleni ifayela lakho lokulondoloza. Lapho ukhetha ithuluzi elinjalo, kuwukuhlakanipha ukuqinisekisa ukuthi liqhathaniswa kanjani nezinye izinhlelo zokusebenza ekilasini lalo ngokusebenza. Ngenhlanhla, DataNumen Access Repair Ithuluzi livela ngezinga lokutakula elingu-93.34%. Lapho usuthole amafayela akho, ungawangenisa kufayela elisha bese ubuyisela i-database yakho.
← Langaphambilini kost